Intii uu ku guda jiray booqashada Sheybaarka Qaranka, ayaa Ergeyga QM wuxuu bogaadiyay horumarka laga gaaray tijaabada Covis-19, wuxuuna soo dhoweeyay dadaallada lagu dhisayo awoodda [waaxda] caafimaadka ee mustaqbalka | UNSOM
18:14 - 17 Jan
Muqdisho – Isagoo ku guda jira booqasho uu maanta ku tegay Shaybaarka Qaran ee Caafimaadka Bulshada ee Soomaaliya (National Public Health Reference Laboratory), ayaa Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka wuxuu bogaadiyay horumarka Soomaaliya ay ka gaartay tijaabada baaritaanka cudurka COVID-19, wuxuuna muujiyay muhiimadda uu sheybaarka dhexe ee qaran iyo shaybaarada kale ku yaal dhamaan dalka ay u leeyihiin wax-ka-qabasahda COVID-19.
"Tijaabada baaritaanka cudurka COVID-19 waa mid muhiim ah, Qaramada Midoobay iyo bulshada caalamkuna waxaa ka go'an inay taageeraan sheybaarka qaranka," ayuu raaciyay. “Horumarka lagu kobcinayo awoodda Soomaaliya ee la-dagaallanka aafada COVID-19 waxay muujineysaa waxyaabaha la gaari karo marka khubarada heer qaran iyo kuwa caalamiga ah ay si wada-jir ah u wada-shaqeeyaan.”
Ku dhawaad ​​7,000 muunadood ayaa la tijaabiyay/baaray
Laga soo billaabo 7dii Abriil ilaa 23kii Juun, Sheybaarka Qaran wuxuu tijaabiyay 6,572 muunadood oo ah COVID-19. Sheybaarka ayaa sidoo kale ah shaybaarka kaliya ee udub-dhexaadka ah ee loogu talagalay in lagu baaro muunadaha COVID-19 ee laga soo qaaday qaar kamid ah Dowlad Goboleedyada, gaar ahaan Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubaland.
WHO waxay ku deeqday hab-marka (protocol-ka) hubinta tayada gudaha iyo tababarro lagu qabtay khadka internetka si loo xaqiijiyo in tallaabooyinka hubinta halbeegga tayada sheybaarka ee gudaha Sheybaarka Qaranka loo raaco si toos ah. Hay’adda Caafimaadka ee QM waxay bixisay xirmooyin qalab baaritaan oo kufilan iyo agab kale oo lagu tijaabiyo muunadaha [oo la isticmaali karo] ilaa bisha Sebtember 2020, waxayna sidoo kale bixisay sahay kale.
WHO waxay sidoo kale gacan ka geysatay diyaarinta laba sheybaar oo kale oo ku shaqeeya qalabka jawaab-siinta degdega ah ee PRC, sheybaaradaas oo laga hirgeliyay Garowe iyo Hargeysa, waxayna Hay’addu bixineysaa taageero kale oo la mid ah noocyadaas, waxayna u bixinaysaa qaab ah qalab sheybaar iyo sahayda la adeegsado.
In kastoo sheybaarada hadda ay diiradda saaarayaan ka-jawaabidda COVID-19, Qaramada Midoobay waxay u aragtaa saddexdas shaybaar inay yihiin maalgashi la maal-geliyay mustaqbalka Soomaaliya.
“Sheybaarka Qaran iyo labada shaybaar ee kale ee leh awoodda baaritaanka ku salaysan habka PCR waxay awood u yeelan doonaan inay mustaqbalka si dhakhso leh u ogaadaan una tijaabiyaan cudurada kale ee faafa – oo ay kujiraan cudur-side kasta oo ugub ah, iyagoo aan u baahanin taageero ama kaalmo dibadeed. Tani waa maalgashi muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya, ”ayuu yiri Md. Swan.
Ka-sokow WHO, Barnaamijka Cuntada Adduunka (WFP), Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS) iyo Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay (UNDP) ayaa taageero u fidiyay Sheybaarka Qaran, iyadoo sidoo kale ay taageero fidiyeen saaxiibada kale ee caalamka.
 Doorashooyinka Federaaliga ah iyo Dhismaha Is-faham Siyaasadeed
 Kafal-celinta caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya: Gaar ahaan barakacayaasha ayaa ah kuwa halista badan ugu jira